Dalka Faransiiska Oo Lagu Soo Rogay Bandoo Deg Deg Ah – Borama News Network
Dalka Faransiiska Oo Lagu Soo Rogay Bandoo Deg Deg Ah
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay bandaw labaad kaas oo soconaya ilaa iyo ugu yaraan dhammaadka bisha Nofeembar.
Mr Macron wuxuu sheegay in talaabooyinka cusub, laga bilaabo jimcaha, dadka kaliya loo ogolaan doono inay guryahooda uga baxaan sababo shaqo ama caafimaad dartiis uun.
Ganacsiyada aan muhiimka ahayn, sida makhaayadaha iyo baararka, way xidhmi doonaan, laakiin iskuulada iyo warshaduhu way sii furnaan doonaan.
Dhimashada maalinlaha ah ee faransiiska waxay mareysaa heerkii ugu sarreeyey tan iyo bishii Abriil. Talaadadii, 33,000 kiis oo cusub ayaa la xaqiijiyay in laga helay dalkaas.
Mr Macron wuxuu sheegay in wadanku uu qatar u galay in “saamaynta darab ee mowjad labaad oo aan shaki ku jirin inay ka darnaan doonto tii hore”.
Dhanka kale, Jarmalka wuxuu soo rogi doonaa bandaw deg deg ah oo aan sidaa u sii cuslayn laakiin ay ka mid tahay xidhitaanka makhaayadaha, goobaha jimicsiga iyo tiyaatarada, ayay tidhi haweeneyda hogaamiyaha ka ah dalkaasi Angela Merkel Arbacadii
Fiditaanka ayaa si aad ah ugu sii kordhaya Yurub oo dhan, oo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska oo Arbacadii shaacisay 310 dhimasho cusub iyo 24,701 xaaladood oo cusub.
Bandow habeenkii ah ayaa ka dhaqan gala dalal dhowr ah, oo ay ku jiraan 46 milyan oo qof oo ku nool Faransiiska.
Warka ku saabsan xayiraadaha cusub ee lagu soo rogay waddamada ugu dhaqaalaha badan Yurub ayaa horseeday hoos u dhac weyn suuqyada maaliyadeed Arbacadii.
Khudbad uu ka jeediyay telefishanka Arbacadii, Mr Macron wuxuu ku sheegay in Faransiisku ay tahay inay hada “si adag u dhaqan geliyaan amarradda dawladda” si looga fogaado in “dib uu u saameeyo cudurka”.
“Feyrasku wuxuu ku wareegayaa xawaare aan xitaa saadaasha ugu xun ee saadaashu aysan fileynin,” ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in kalabar dhamaan sariiraha daryeelka degdega ah ee isbitaalada Faransiiska ay degan yihiin bukaanada Covid.
Madaxweynaha ayaa sheegay in sharciyada cusub, dadku ay u baahan doonaan inay soo buuxiyaan foom si ay ugu sababeeyaan ka bixitaanka guryahooda, sidii looga baahnaa bandawgii ugu horeysay ee bishii Maarso. Kulamada bulshada ayaa iyana la mamnuucay.
“Sida guga oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad ka tagto gurigaaga kaliya marka aad shaqeynayso, iyo ballamaha caafimaadka, iyo inaad gargaar siiso qof ehelkaaga ah, inaad wax ka soo iibsato alaabada daruuriga ah ama aad socod ku tagto gurigaaga agtiisa,” ayuu yidhi Mr Macron.
Laakiin wuxuu caddeeyay in adeegyada bulshada iyo warshadaha ay sii furnaan doonaan, isagoo intaas ku daray in dhaqaaluhu “uusan ahayn inuu istaago ama burburo”.
Ganacsade Dhawaan Lagu Dilay Kismaayo Oo La Sheegay In Ay Ka Dambeeyeen Ciidanka Axmed Madoobe
Mareykanka Oo Ka Soo Horjeestay In Haweeneydii Ugu Horreysay Oo Afrikaan Ahi Ay Hoggaamiso Ururka Ganacsiga Adduunka
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo Dardaaran Culus U Diray Taliye Qaybeedyada Somaliland
Bnnstaff Bnnstaff January 27, 2021
Madaxwaynaha Cusub Ee Maamulka Hirshabeele Oo Baaq U Diray Beesha Caalamka
Bnnstaff Bnnstaff November 14, 2020
Sheekh Dirir Oo Si Adag Ula Hadlay Masuuliyiintii Ka Qayb Galay Xuskii Loo Sameeyay Askarrtii Ingiriiska